Shadowhunters, inonakidza uye isinganzwisisike nyika kuti uwane | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Type, Vechidiki Mabhuku
Shadowhunters akateedzana emabhuku akagadzirwa nemunyori weAmerica Cassandra Clare. Kusvikira zvino, Vanogadzira inovhara seti nhatu dzemanoveli: yekutanga ndeye Zviridzwa zvinofa (muchiSpanish yaingotengeswa se "Vanogadzira”) Yakabudiswa pakati pa2007 na2014. Yechipiri, Iyo infernal zvishandiso (Shadowhunters: mavambo) prequel yakaburitswa pakati pa2010 na2013.
Seti yechitatu ndeye Iyo Rima Artifices (Shadowhunters: Kuberekwazve), yakaburitswa pakati pegore ra2016 na2018. Iyi nhevedzano yakadudzirwa mumitauro inodarika makumi matatu. Zvakare, yakagadziriswa kune iyo cinema (2013) uye kuterevhizheni (sa2016). Iyo nyaya yakagadziriswa mukati meiyo mhando yemafungidziro enganonyorwa. Iyo ine zvinhu zvekuita, ngano zviverengero uye kudanana izvo zvinoita iro riite rinonakidza kwazvo basa.
1 Nezve munyori
2 Kubudirira kweiyo Shadowhunters saga
2.1 Shadowhunters: Iwo Anofa Midziyo
2.2 Masaga emaguta
2.3 Shadowhunters: iyo infernal zvishandiso
2.4 Mufananidzo wakajeka
2.5 Ngano kubva kuShadowhunter Academy
2.6 Shadowhunters: Iyo yakasviba artifices
3 Shadowhunters: Guta reMapfupa
4 Shadowhunters: Guta reMadota
5 Shadowhunters: Guta regirazi
6 Shadowhunters: Guta reNgirozi Dzakawira
7 Shadowhunters: Guta remweya yakarasika
8 Shadowhunters: Guta reMoto weKudenga
Cassandra Clare akaberekwa muna Chikunguru 27, 1973 muTehran, Iran. Zita rake chairo ndiJudith Romelt, aiye akatora zita rake rekunyepedzera panguva yehudiki hwake akafuridzirwa nedzidziso dzeepiki dzaJane Austen. Ruzivo rwehunyanzvi rwunoonekwa mumhuri yake yezvitendero zvechiJuda. Baba vake ndivo munyori uye purofesa wezvinyorwa Richard Romelt uye sekuru vake amai vaMax Rosenberg, mugadziri wefirimu.
Kufamba chaive chiitiko chenguva dzose panguva yehudiki hwake. Akagara nemhuri yake muFrance, United Kingdom neSwitzerland kudzamara vazogara muUnited States. nguva pfupi asati asvika gumi. Kakawanda kuendeswa pamwe nemamiriro emhuri anokodzera zviitiko zvehungwaru, akafarira tsika dzekuverenga dzechidiki Judith, uyo akatanga kunyora nyaya panguva yehudiki hwake kufadza shamwari dzake.
Mushure mekupedza zvidzidzo zveyunivhesiti kuBarnard College, Cassandra Clare akashanda semupiro kumagazini akasiyana siyana ezvekuvaraidza muNew York neLos Angeles kufukidza mukurumbira nhau. Zvinyorwa zvake zvekutanga aive zvinyorwa na fanfiction rakafemerwa na Harry Potter (Iyo Draco trilogy) uye Ishe wemhete (Iwo chaiwo madhiri). Akatanga kukura Guta remabhonzo (kutanga kwe Zviridzwa zvinofa) muna 2004.
Kubudirira kwesaga Shadowhunters
Shadowhunters: Iwo Anofa Midziyo
Kutanga muna 2006, Cassandra Clare akafunga kuzvipira nguva yakazara yekunyora. Kwapera gore, kuvhurwa kwe Guta repfupa, kutanga kwesaga rakabudirira Vanogadzira (Shadowhunters: Iwo Anofa Midziyo). Iyi inyaya yenguva ino yekufungidzira yakavakirwa yakakomberedza mavara Clary Fray, Jace Herondale, naSimon Lewis.
Zvino - mukati mekuteedzana kwe Zviridzwa zvinofa- zvinyorwa zve Ash guta (2007), Crystal Guta (2009), Guta rengirozi dzakadonha (2011), Guta reMweya Yakarasika (2012) uye Guta reMoto weKudenga (2014).
Shadowhunters: iyo infernal zvishandiso
Mukufananidza, mavhoriyamu eiyo trilogy akaonekwa Shadowhunters: iyo infernal zvishandiso, Mechanic ngirozi (2010), Mechanical muchinda (2011) uye Clockwork Princess (2012). Iyo infernal zvishandiso (muchiSpanish yakatengeswa se "Iyo Mavambo") prequel yakaiswa munguva dzeVictorian uye hunhu hwayo ndiTessa Grey.
Saizvozvo, muna 2013 comic yakavakirwa pa Vanogadzira, inoratidzwa naNicole Virella. Muna 2014 akazviratidza Iyo Bane nhoroondo, yekutanga nyaya pfupi yakaiswa muchadenga ichi. Yakanga yakanyorwa pamwe naSarah Rees Brennan naMaureen Johnson.
Ngano kubva kuShadowhunter Academy
A Iyo Bane Makoronike zvakaitika kwaari Ngano kubva kuShadowhunter Academy - Yakapedzwa muna 2016 pamwe chete naBrennan, Johnson, naRobin Wasserman- uye Midzimu yeShadow Market (2018) iyo yairatidza mipiro yezvinyorwa kubva kuna Kelly Link, kunze kwaBrennan, Johnson naWasserman. Pamusoro pezvo, mu2019 kuunganidzwa kwe Vakuru vanotuka. Izvi zvakanyorwa pamwe naWesley Chu uye Maawa ekupedzisira, yakaziviswa ye2020.
Shadowhunters: Iyo yakasviba artifices
Kuburitswa kwa Mukadzi pakati pehusiku (2016) yakaratidza kutanga kweiyo trilogy Shadowhunters: Iyo yakasviba artifices (Shadowhunters: Kuberekwazve). Iri basa rinotevera Emma Carstairs, hunhu anga atove akaunzwa mukati Guta reMoto weKudenga. Iyi nhevedzano yakapedziswa ne Ishe wemimvuri (Ishe wemimvuri - 2017) uye Mambokadzi wemhepo nerima (Mambokadzi weMhepo uye Rima - 2018).
Shadowhunters guta remabhonzo (Guta remabhonzo)
“Muroyi akashevedza mutumwa Raziel pamberi pake, uyo akasanganisa chikamu cheropa rake neropa revanhu mukapu, ndokupa kuvarume ivavo kuti vanwe. Avo vakanwa ropa reMutumwa vakave vaShadhuhunters, sezvakaita vana vavo nevana vevana vavo. Kubva ipapo zvichienda mberi, mukombe wakazozivikanwa seMortal Cup. "Kunyangwe ngano iyi ingave isiri yechokwadi, chiri chokwadi ndechekuti nekufamba kwemakore, apo huwandu hwevaShadowhunters hwakadzikira, zvaigara zvichikwanisika kugadzira zvimwe uchishandisa Mukombe."
Mune ino 516-peji bhuku (Spanish vhezheni), Cassandra Clare anozivisa muverengi kune rake rine simba renyika rizere newawolves, madhimoni, vampires, fairies nengirozi, uko kupokana uye kudanana kusiri kushayikwa. Iyo nyaya inotanga naClary Fray, mudiki muimbi weanenge makore gumi nematanhatu, ari mukirabhu yebato rinotyisa muNew York., Pandemonium.
Ikoko, iye anotevera mukomana akanaka-ane bvudzi rebhuruu kusvikira aona kupondwa kwake, kwakaitwa nevarume vechidiki vatatu vasingazivikanwe vane ganda ravo rakafukidzwa nematatoo.
Vatatu varwi vanozivisa kuna Clary kuti mukomana webvudzi rebhuruu aive dhimoni. Nekudaro, iye anosarudza kujoina nevavhimi pachinangwa chavo chekubvisa nyika kutyisidzira kwedhimoni, uye Jace, mukomana akafanana nengirozi, uyo anowanzo kumutsamwisa nekuda kwehunhu hwake hwesimba.
Shadowhunters: Guta reAsh (Guta remadota)
Clary Fray anoda kubva paRadar yevaShadhuhunters nekuti shamwari yake yepamwoyo, Simon Lewis, anomuda ... arikushanduka kuita munhu asingazivikanwe. Asi kana iyo ngirozi uye isina tariro Jace kana yepasi pasi iri kuda kumurega aende. Mamiriro acho akaomarara mushure mekuteedzana kwemhondi.
Clary anonyanya kufungidzira Valentine Morgenstern, baba vake vekubereka. Asi Jace anoita zvinoshamisa nekuzvipira kubayira zvese kubatsira Valentine. Iyi 464-peji yechipiri chikamu (Spanish post) inoongorora zvishoma zvakapfuura zvaClary uye inotsvaga kurwira masimba pasi pevhu.
Shadowhunters: Guta reGirazi (Guta regirazi)
Mune ino vhoriyamu yechitatu yemapeji 544 (zvinyorwa muSpanish), Clary anopedzisa kuzvitora se "nephilim", munhu akagara nhaka yehunhu hunhu kubva kuna amai vake Jocelyn Fray, uyo ari mungozi yekufa. Kuti amununure, Clary anofanira kuenda kumusha wemadzitateguru wevaShadhuhunters: Guta regirazi Zvichakadaro, Jace anoedza kumunyengerera kuti arege parwendo rwake.
Zvakare, Simon akavharirwa neShadhuhunters nekuti ivo havavimbe vampire immune kune zuva. Zvisinei, Clary ane rubatsiro rwemumwe muvhimi asingazivikanwe kuti aite basa rake. Asi iye zvino Valentine ine nzira yekuparadza zvese zvisikwa zvepasi ... iyo chete imwe nzira yekurwisa iyi tyisidziro ndeyekuti vavhimi vaite mubatanidzwa usina kugadzikana nevavengi vavo vanofa: maveve, mavampires nemadhimoni.
Shadowhunters: Guta reNgirozi Dzakawira (Guta rengirozi dzakadonha)
Runyararo rwakasvika kumagumo ezviitiko zve Crystal Guta, pakati pevavhimi vepasi pevhu uye nevamwe maShadows HuntersEhe, iye anosara mune limbo kana mumwe munhu atanga kuuraya nhengo dzedenderedzwa raValentine. Nekudaro, zviitiko zveichi chitsva chemapeji-mazana mana nemakumi matanhatu neshanu (shanda muchiSpanish) chakakwenenzverwa zvikuru nekuita kwakawanda, kunyengera uye kutengesa.
NdiSimon chete - pakupedzisira akashanduka kuita vampire - aigona kunzvenga kukonana kutsva uye kweropa. Zvichakadaro, rudo rwaClary naJace rwuri kuwedzera runosvika padanho rekupedzisira, apo pavanozivisa chakavanzika chine chekuita nemhuri yake chinogona kusimbisa chisungo chavo… kana kuchiparadza zvachose.
Shadowhunters: Guta reMweya Yakarasika (Guta remweya yakarasika)
Jace Herondale ave mushandi wezvakaipa nekusingaperi akabatana naSebastian. VaShadowhunters vanofungidzira maNefirimu akarasika. Ehe, kunze kweboka diki ravo, avo vanogadzirira kupokana neConclave apo Clary anotarisana nematanho ematambudziko ane njodzi nechinangwa chekuponesa mweya wemudiwa wake.
Chitsauko chekupedzisira che Zviridzwa zvinofa inovhara mazana mashanu nemakumi mashanu neshanu (Spanish edition) kwaunogona kuona rudo rusingaperi rwunonzwa naClary kuna JaceNekuti ari kuda kuzvipira iye, achiisa kunyange mweya wake panjodzi. Zvakaipisisa pane zvese, Clary haana chokwadi kana Jace adzokera kune kwake kwekare kana kana mudiwa wake akadonha kubva munyasha zvachose.
Quote naCassandra Clare.
Shadowhunters: Guta reMoto weKudenga (Guta reMoto weKudenga)
Chazvino chiverengero musaga chine mazana makumi maviri nemakumi manomwe nemaviri mapeji (kuburitswa kweSpanish) kwakazara chiito nekuti inotanga neShadow World yakanyudzwa zvakakwana murima rinotyisa. Kusaruramisira uye rufu zvakazara pachiitiko apo Clary, Jace, Simon nevamwe vavarwi vanosangana zvakare kusangana nemuvengi mukuru maNefirimu akambove: Jonathan Morgenstern.
Zviri nezve mukoma waClary, akashanduka kuita dhimoni nekuda kwababa vake Valentine. Wekupedzisira akapa ropa redhimoni kuna amai vake, Jocelyn, apo aive nepamuviri. Kuvharwa kweakateedzana inyaya inonakidza kwazvo. Izvi zvinokonzerwa nekuzvipira kwakawanda kunofanirwa kuitwa neve protagonists uye kukundikana kwaJonathan. Naizvozvo, kuikunda kunoda mhinduro iri kunze kwenyika inozivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vanogadzira
Ivan Krylov. Anonyanya kuzivikanwa weRussia fabulist. Chiitiko chekuzvarwa kwake
Farewell kuna David Gistau, mutori venhau uye munyori. Mabhuku avo